प्रजातन्त्रको आडमा अप्रजातन्त्रको उदय
‘कम्युनिज्‍म’ पछि सबभन्दा छोटो समयमा अवसान हुने विचारधाराको रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर्न जाने सम्भावना देखिन्छ ।
२८ फाल्गुन २०७६ बुधबार
प्रजातन्त्र बीसौँ शताब्दीको सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक विचारधारा थियो । यो विचारधाराका लागि संसारका आधाभन्दा धेरै मुलुकमा आन्दोलन भए । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा ओरालो लाग्‍न सुरु भएको यो विचारधारा तेस्रो दशकको सुरुआतमा आएर निकै संकटमा पर्न गएको छ ।
यो संकटबाट बाहिर आउन त्यति सजिलो भने छैन । ‘प्रजातन्त्र’ संकटमा पर्न जाने धेरै कारणमध्ये सबभन्दा प्रमुख कारण यसलाई चलायमान बनाउने पात्रहरूले ल्याउने नीति, नियम तथा राजनीतिक संस्कार हो । पछिल्ला वर्षमा यो निर्वाचित कुलीन वर्ग र प्राविधिक/विज्ञ (टेक्नोक्र्याट) को चंगुलमा पर्न गएको छ, जसले आम नागरिकका समस्यालाई आफ्नो सुविधाका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउने गर्छन् ।
उदारवादी प्रजातन्त्रले धेरै आरोप खेप्नु परेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानताको नाममा समूहगत अधिकार, भिन्‍नता तथा विविधता बुझ्‍न नसकेको, बहुमत एवं अल्पमतको नाममा एकअर्काविरुद्ध सुविधाअनुसार प्रयोग गरेर राज्य तथा राष्ट्रबीच द्वन्द्व चर्काएको आरोप लाग्दै आएको छ । राजनीतिक उदारवादको नाममा केही शाश्वत मूल्य–मान्यतालाई विस्थापन गर्ने कोसिस गरेको परिणामस्वरूप प्रजातन्त्रको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस संसारभरि गरिएको छ । सायद त्यही भएर होला, पछिल्ला दिनमा ‘राष्ट्र–राज्य’ र ‘राज्य–राष्ट्र’ दुवैलाई छाडेर धेरैजसो आधुनिक राष्ट्रहरू आफूलाई ‘सभ्यतामूलक’ राष्ट्र भनेर चिनाउने होडबाजीमा अगाडि बढेका छन् ।
राष्ट्र–राज्यको अवधारणा, भूमण्डलीकरण र प्रविधिबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि प्रजातन्त्र संकटमा पर्नु पछाडिको अर्को समस्या हो । किनभने भूमण्डलीकरण, अर्थराजनीति र प्रविधिले राज्यका अवधारणामाथि ठूलो धक्का दिएको छ । यसको सबभन्दा ठूलो असर स्थापित मूल्य–मान्यतामा हुन गएको क्षयीकरण तथा नयाँ मूल्य–मान्यताको आगमन हो । जुन राष्ट्रले राजनीतिक उदारवाद, सामाजिक रुढीवाद तथा अर्थराजनीति र समाजको बदलिँदो पक्षलाई आत्मसात र सन्तुलन गर्न सके त्यस्ता राष्ट्रमा अहिलेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली केही वर्षसम्म चल्न सक्ला । नत्र ‘कम्युनिज्म’ पछि सबभन्दा छोटो समयमा अवसान हुने विचारधाराको रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर्न जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आम नागरिकले मुलुकको मुहार फेरिने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेता सुहाउँदो प्रजातन्त्रबाहेक जनताले चाहेजस्तो प्रजातन्त्र भविष्यमा पनि उपलब्ध हुने छैन । यसले उठाउने सबभन्दा ठूलो प्रश्न हो, आधुनिक प्रजातन्त्र नेपाली समाजको चरित्रसँग मेल नखाएकै हो त ? आखिर किन नेपालजस्ता मुलुकले सधैँ प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ? किन प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनपछि मुलुक पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ ? नेपालमा प्रत्येक आन्दोलनपछि एउटा वर्गको उत्थान हुने तर आम नागरिकका मुद्दा जहिल्यै ओझेल परेका छन् । आज नेपालको राजनीति ठीक ०४८ लगत्तैको नेपाली कांग्रेसको सरकारपछिको अवस्थामा फर्केको छ ।
यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछन्– नेपालमा जनता प्रजातन्त्र चाहन्छन् तर राजनीतिकर्मीहरू बढीजसो अवसरवादी छन् । ०४८ सालजस्तै ०६२/६३ पछि पनि राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिले दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति हासिल गरे, जनता भने रसातलमा पुगेका देखिन्छन् । आम नागरिकलाई फकाउनका लागि तथाकथित उपलब्धिको रटान गराएर राजनीतिलाई एउटा विशिष्ट वर्गको सुविधाको क्षेत्र बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यी कारणले गर्दा नै होला, हालै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालीको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था खस्किँदै गएको पाइएको छ ।
पुरातन राज्य, नयाँ विचारधारा : नेपाल संसारका पुरातन राष्ट्रहरूमा अग्रणी रूपमा पर्न जान्छ । आधुनिक राज्य निर्माणको क्रमानुगत विकास हेर्ने हो भने यो २२ औँ स्थानमा पर्न जान्छ । त्यसैगरी प्रजातन्त्रलाई शासन प्रणालीको रूपमा अँगाल्ने राष्ट्रहरूमा पनि नेपाल धेरै देशभन्दा अग्रणी देखिन्छ । सभ्यता र संस्कृति विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल तथा भारतवर्षका अरू राष्ट्रहरू युरोप र पश्चिमका विकसित राष्ट्रभन्दा निकै अगाडि देखिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आखिर किन आधुनिक प्रजातन्त्रले यहाँको भूमिमा जरा गाड्न सकेको छैन त ? यो अहिलेको सबभन्दा अहं प्रश्न हो । नेपालजस्ता राज्यहरूमा देखिएको एउटा समस्या सभ्यता र राजनीतिक विचारधारासँग पनि सम्बन्धित छ । पुरातन सभ्यता र नयाँ विचारधाराको बीचमा यहाँ तालमेल हुन सकेको छैन । अहिले यो समस्या पश्चिमा मुलुकमा पनि देखिएको छ ।
तेस्रो विश्व र विकसित मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र सफल र असफल हुनुका पछाडि मिश्रित कारण देखिन्छन् । विकसित मानिएको पहिलो विश्वका राष्ट्रहरूको प्रजातन्त्र ‘भौतिकवाद’ र यसको दायाँबायाँ विकसित भएका वादबाट पीडित छ । यसले व्यक्तिको भौतिक प्रगतिलाई मात्र केन्द्रमा राखेको, भावना र मूल्य–मान्यतालाई कुनै स्थान दिएको देखिँदैन । राजनीतिक उदारवादको नाममा लोकका मुद्दाहरू छाडेकाले ‘राजनीतिक लोकप्रियतावाद’ को उदय भयो । किनकि राजनीतिक उदारवाद ‘स्वतन्त्रता’ र ‘समानता’ उपभोग गर्न सक्ने निश्चित वर्गका लागि मात्र हुन गयो । यी सबै ‘हिलीबिली’ नागरिकको पहुँचभन्दा परका विषय हुन गए ।
यति भन्दै गर्दा यसको विकल्प ‘कम्युनिज्म’ नभएर राजनीति शक्तिशाली नेताको हातमा पर्न गयो, जसले लोकका मुद्दा समाते । ‘कम्युनिज्म’ असफल विचारधारा साबित भइसकेकाले पहिलो विश्वमा लोकप्रियतावादको विकास भयो भने तेस्रो विश्वको राजनीतिमा व्यक्तिवादको उदय ।
‘कम्युनिज्म’ असफल विचारधारा साबित भइसकेकाले पहिलो विश्वमा लोकप्रियतावादको विकास भयो भने तेस्रो विश्वको राजनीतिमा व्यक्तिवादको उदय ।
लोकप्रियतावादले राजनीतिमा विपक्षीलाई पनि सखाप पार्‍यो । तेस्रो विश्वमा प्रजातन्त्र व्यक्ति र समाजलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसैको असर होला, संविधान लागू भएपछि आएका नियम, कानुनको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र देखिन्छ ।
यसरी प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिक पार्टीमार्फत राज्य र यसका अंगहरू नियन्त्रण गरेर राज्यलाई ‘पार्टी र नेता’ र तिनका आसेपासेले मात्र भोग गर्न पाउने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ । त्यसैगरी नेताहरू तथा चाकरीबाजले यो जन्म र मरणपछि पनि कृत्रिम रूपमा केही व्यक्तिलाई अजम्बरी बनाउने प्रणालीको विकास गरेकाले राजनीतिको उद्देश्य नै फेरिएको देखिन्छ । नेताको नाममा भौतिक संरचनाको नामकरण तथा ठूल्ठूला सालिक निर्माण गर्ने परिपाटीले प्रजातन्त्रको उपहास त गराउँछ नै । यसले ‘भगवान्’ र प्रकृतिको स्थापित मान्यतालाई पनि चुनौती दिँदै छ ।
व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने परम्पराको इतिहास आधुनिक राजनीतिसँगै सुरु भएको हो तर साम्यवादी र सामन्ती (अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मात्र) समाजमा भने यसको गहिरोमा जरो भेट्न सकिन्छ । अर्को पक्ष– पेसेवर राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासेलाई मानपदवी, अलंकार सबै हुने तर सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने केही नहुने । यो सबै प्रक्रियामा एउटा वर्गले अर्कोको संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेतृत्व तहमा धेरै हदसम्म बाँडीचुँडी खाने चलनै छ ।
यही परिपाटीको उपज होला, केही व्यक्ति जुन व्यवस्था आए पनि पुरस्कृत भइरहने । केही हदसम्म यसलाई मानवीय स्वभाव भनेर छूट दिन सकिन्छ तर कानुनको परिधि नाघेर व्यक्ति संरक्षण गर्ने परिपाटीले समस्या झन् विकराल भएर आएको छ । यसले यो कस्तो प्रजातन्त्र भन्‍ने प्रश्न जन्माउँछ ? साँच्चै भन्‍ने हो भने राज्य बलियो बनाउने नाममा नेता र पार्टी बलियो बनाउने तर नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटीको विकासले आधुनिक शासन पद्धतिप्रति नै चेतनशील वर्गको वितृष्णा जाग्दै गएको छ । यो चेतनशील वर्ग राजनीतिक (कु) संस्कारले गर्दा राज्यभन्दा वर्तमान अर्थराजनीतिले निर्माण गरेको अवसरसँग बढी अन्तरक्रिया गर्न सजिलो ठान्छ । हामीले साँच्चै बलियो राज्यको चाहना गर्ने हो भने यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै रूपमा नागरिकको संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ र त्यसै किसिमका नियम, कानुन र अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
मलेसिया कि मिलिसिया : प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिक आन्दोलन गर्ने र विकासको नाममा गरिबीको महोत्सव मनाउने प्रवृत्तिले दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्रको अनुभूति धेरैले गर्न सकिरहेका छैनन् । किनकि यी दुइटै प्रकृतिले राजनीतिक सत्ताको निजीकरण, मुनाफाको निजीकरण र गरिबीको वितरण गरेर लामो समयसम्म उदारवाद, समाजवाद र कम्युनिज्मको नाममा सीधासोझा नागरिकलाई अल्मल्याइरहेको छ । अहिलेको प्रजातन्त्र पश्चिमा मुलुकमा लामो समयसम्म छलफल र बहस भएर माथि भनेजस्तै बीसौँ शताब्दीतिर मात्र पूर्ण शासकीय प्रणालीको रूपमा आएको हो । तर यी वाद समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति, परम्परा र नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्नका लागि बौद्धिक ठालूहरूले पहिले नै विकास गरेका हुन् ।
यी वादकै सेरोफेरोमा विभिन्‍न बहानामा पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई विस्थापित गर्ने राजनीतिक परिपाटीको विकास चरम रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । यो नेपालको अहिलेको रोग भने होइन । शाहवंशीय राजाहरूलाई राणाले बन्धक बनाए, राणालाई प्रजातन्त्रवादीले विस्थापित गरे । आन्तरिक भागबन्डा नमिलेर बाह्य सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भएकाले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई राजाले लखेटेर पञ्चायत ल्याए । पञ्चायतलाई फेरि कांग्रेस, कम्युनिस्ट मिलेर पाखा लगाए । यिनलाई फेरि माओवादीले लखेटे । यो परम्परा निरन्तर चलिरहेको छ । अहिले कमरेडहरूबीचको खिचातानी पनि कसले कसलाई, कसरी र कहिले विस्थापित गर्ने भन्‍ने नै हो । वैद्य कमरेडहरू विस्थापित भइसके । विप्लवहरू अवसरको खोजीमा छन् । पञ्चहरू विलय भइसके । कांग्रेस बेहोस छ । यसलाई होसमा ल्याउन निकै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै पनि एक थरी कमरेडहरूका लागि आन्दोलन पूरा भएको छैन भने प्रजातन्त्रमा साँच्चै विश्वास गर्नेहरू अलमलमा छन् ।
अरूलाई विरोध गरेर तथा शत्रु देखाएर सत्तामा आएका, आफूसँग कुनै दृष्टिकोण नभएका तर दृष्टिदोष भएका राजनीतिज्ञबाट देश र जनताको भलो हुने सम्भावना कम हुन्छ । एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दोषारोपण गर्नेे र त्यहीअनुसार सत्ता समीकरणको विकास गर्ने अहिलेको स्थापित राजनीतिक चरित्र भएको छ । त्यसैगरी कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादीलाई र पुँजीवादीले कम्युनिस्टलाई दोषारोपण गर्ने तर हामी नित्य, नैतिक र काम्यमध्ये कुनै पनि कर्म नगर्ने । माक्र्सवादलाई आधार बनाएर कम्युनिस्ट भएकाहरू हिजोका पुँजीवादीभन्दा केही फरक छैनन् र फरक हुने पनि छैनन् । किनकि कम्युनिस्ट फस्टाउनका लागि गरिबी र गरिबहरूको आवश्यकता पर्छ ।
यो दुवै वर्गलाई भित्र र बाहिर गोलबन्द गर्न वर्ग शत्रुको निर्माण जरुरी हुन्छ । यो प्रक्रियाका लागि कहिले राष्ट्रियतामाथि खतरा देखाइन्छ भने कहिले प्रजातन्त्रमाथि । अर्थात्, जनतालाई डर देखाइराख्‍नुपर्छ । यिनले बनाएका नीति, नियम पनि यही प्रक्रियालाई सहयोग पुग्‍ने गरी निर्माण गरिन्छन् । राजनीतिको प्रभावले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया पछिल्ला वर्षहरूमा निकै अगाडि बढेको छ । यती होल्डिङ, गोकर्ण र बालुवाटार जग्गा काण्ड यसैका उपज हुन् । यस्तो प्रक्रियाले नीतिमाथि नै ठूलो प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र अरू सार्वजनिक क्षेत्र डाँवाडोल छन् । अदालत सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ । कर्मचारीतन्त्र जनतामाथि हावी छ र आफूलाई शासककै रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।
यही बीचमा हामीले अँगालेको विकासको परिपाटीले गाउँ र सहरको बीचमा ठूलो खाडल ल्याएको छ । नवउदारवादको आडमा सुरु भएको डोजरे–विकासले जीवन र जमिन दुवैलाई संकटमा उभ्याएको छ । त्यसैगरी पराधीन अर्थतन्त्र, मौलाएको दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था एवं यसको र राजनीतिबीचको साँठगाँठले राज्यलाई नियन्त्रण गरेको छ । दलाल अर्थतन्त्र र राजनीतिले एउटा यस्तो वर्गको निर्माण गरेको छ, जसले जनतालाई सपना बाँड्छ तर सत्ता र समृद्धिको महचाहिँ आफू मात्रै काढ्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाली राज्यको वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यसले कसको संरक्षण गर्छ ? यो राज्य कसको हो ? त्यो किनभने पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिक राज्यबाटै ठगिँदै आएका छन् र राज्यले तिनलाई वस्तु विनिमयको रूपमा हेर्छ । वस्तु विनिमियको रूपमा हेर्ने भएकाले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा श्रम सम्झौता गरेर नागरिकको व्यापार गर्छ । शक्ति र सत्ताबाहिर बाँच्न नसक्ने राजनीतिज्ञहरूको क्रियाकलापबाट प्रजातन्त्र अगाडि पनि बढ्दैन, नागरिकका आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदैन । अहिलेको प्रजातन्त्र र विकासको मोडलले नेपाली युवालाई ‘मलेसिया’ पुर्‍याउँछ या ‘मिलिसिया’ बनाउँछ । किनकि लामो समय सत्तामा बसेका व्यक्तिका नै आजका दिनसम्म आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएका छैनन् भने अरूका लागि तिनले कहिले र कसरी सोच्‍न सक्छन् ! सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकताको समस्या समाधान हुन सक्छ तर शासक वर्गको हुने देखिँदैन ।
हाम्रा नेताहरूलाई यी सबै पक्षको विषयमा ज्ञान नभएको होइन । हाम्रो समस्या ज्ञानको होइन, आत्मज्ञानको हो । आत्मज्ञान अभावमा ज्ञानको अर्थ रहँदैन ।
स्वदेशमा बेरोजगार र अपहेलित तथा विदेशमा पनि पीडित हुने स्थितिको अन्त्य हाम्रो प्रजातन्त्रले आजका दिनसम्म गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली युवा विश्वभरि मौलाउँदै गएका आतंककारी र गैरराज्यकर्ताहरू (नन स्टेट एक्टर्स) को चंगुलमा नपर्लान् पनि भन्‍न सकिँदैन । अर्को पक्ष, वर्तमान अन्योलकारी समयमा नेपाल फेरि राजनीतिक आन्दोलनको चक्रव्यूहमा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यस्ता आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिने विचारधारा, एजेन्डा, नारा र जनशक्तिको हामीकहाँ कमी पनि छैन ।
राजनीतिको बजारीकरण : राजनीतिमा देखिएको बढ्दो बजारीकरणले राज्यलाई चलायमान बनाउने वर्ग र माफियाबीच अन्तरघुलन हुन गएको छ । यो अन्तरघुलनको सबैभन्दा ठूलो असर राजनीतिले लिने निर्णयमा पर्न गएको छ । राजनीतिक दलहरूले नाफा र नोक्सानको आधारमा राजनीतिक निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गरेकाले राजनीतिमा अहिले विभिन्‍न विसंगति देखिएका छन् । जब बजारको प्रभुत्व राजनीतिमा पर्न जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीले गर्ने निर्णय जनताका चाहनाअनुसार हुन सक्दैनन् । किनकि हिजोदेखि नै राज्यको पहिले बजारीकरण भयो र पछि आएर राजनीतिक पार्टीको सहायताबाट निजीकरण भएपछि सापकोटाहरू सभामुख बन्‍ने भए । वामदेवहरूलाई राष्ट्रिय सभामा जाने वातावरण बन्‍न सक्ने भयो । तर शिवमायाहरूले भने बजारले निर्माण गरेको शक्ति संरचनासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्मला पन्तहरूले न्याय पाउँदैनन् ।
बजारीकरणको चरम प्रभावले नागरिक समाज पनि खुम्चिन गयो तथा यो पनि बजारकै सिद्धान्तबाट परिचालित हुन गयो । बजारको राजनीतिमा पर्न गएको प्रभाव निर्वाचन प्रक्रियामा प्रस्ट देखिएको छ । यही अवस्था रहे यो भोलिका दिनमा भयावह भएर आउनेछ । त्यतिबेला राजनीतिको सही अर्थमा मृत्यु हुनेछ र बजारको विजय हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध बजारले निर्धारण गर्नेछ । बजारमा त्यही वर्गको वर्चस्व हुन्छ, जुन समाजमा आर्थिक र राजनीतिक पक्षबाट बलियो हुन्छ ।
परिवर्तनपछि केही नभएको भने भन्‍न मिल्दैन किनकि हिजो र आजको परिस्थितिमा ज्यादै अन्तर आएको छ, सकारात्मक या नकारात्मक । तर राज्य व्यवस्थाले केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउने, राज्य पहुँचवालाको लागि मात्र भएको तथा कानुनी शासनको अभाव भएकाले मध्यम वर्ग र निम्नमध्यम वर्गमा निराशाको बादल मडारिएको छ, जुन स्वाभाविकै हो । यी दुवै वर्गलाई धेरै थोक चाहिन्छ । यो वर्ग धर्म, संस्कृति, परम्परा, विकास, प्रजातन्त्रको विषयमा बढी चिन्ता गर्छ तर उसले चाहेअनुसार न हिजो थियो, न आज छ, न त भोलि हुने अवस्था देखिन्छ । केही वर्ग मात्र धनी हुने र सत्तामा पुग्‍ने तथा राज्यका संरचना त्यसैका लागि प्रयोग हुने हुनाले माथि उल्लिखित कुनै पनि थोकको संरक्षण गर्न सकिँदैन ।
केही व्यक्तिलाई छाडेर हाम्रो राजनीति र नेतृत्व न हिजो सक्षम थियो, न त आज छ । यो राज्य नेपाली समाज र यसका मूल्य–मान्यताले धानेको हो, जुन हिजो र आजसम्म बलियो नै छ । भोलि के होला भन्‍न गाह्रो छ ।
निश्चितचाहिँ के छ भने यही अवस्था रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा पनि राजनीतिले सक्षमता हासिल गर्ने सम्भावना कम छ । यस्तो राजनीतिले राष्ट्रिय मात्र होइन, क्षेत्रीय असुरक्षा पनि निर्माण गर्ने प्रबल सम्भावना छ । सायद अहिले नेपालमा देखिएको शक्ति राष्ट्रहरूको संघर्षका पछाडि हाम्रो कच्चा परराष्ट्र नीति जिम्मेवार मानिन्छ । आखिर किन यस्तो भयो त ? हाम्रा नेताहरूलाई यी सबै पक्षको विषयमा ज्ञान नभएको होइन । हाम्रो समस्या ज्ञानको होइन, आत्मज्ञानको हो । आत्मज्ञान अभावमा ज्ञानको अर्थ रहँदैन । उदाहरणका लागि, रावण शिवका प्रिय शिष्य र ज्ञानको हकमा चतुर्वेदी थिए तर आत्मज्ञानको अभावले आफ्नो र पराईबीचको भिन्‍नता छुट्याउन सक्दैनथे । उनका लागि आफ्नो त आफ्नो नै भयो तर अरूको पनि आफ्नो बनाउन चाहन्थे । अर्थात्, मन्दोदरी पनि आफ्नै, सीता पनि आफ्नै भन्‍ने रोगले ग्रसित अन्तरद्वन्द्वबाट पीडित थिए । रावण जब रामको रूपधारण गरेर सीताहरण गर्न जान्थे, उनको ‘रावणत्व’ हराएर जान्थ्यो । हामी सबैले रामको राजनीति अनुसरण गर्न सक्यौँ भने धेरै समस्या समाधान भएर जानेछन् ।
भविष्यमा पनि मानव जातिले पटक-पटक महामारी वा यस्ता समस्यासँग जुधिरहनु पर्ने हुन्छ। कोरोनासँ...
कोरोना कहरपछिका प्रश्न
प्रकोपका बेला कुनै व्यवस्थालाई दोष दिनु उपयुक्त नहोला तर यो उदार अर्थव्यवस्थाको उपज हो भन्...
कोरोना महामारीपछि अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थान
विश्वले दक्षिण कोरियाबाट पाठ सिकिरहेका बेला नेपालले पनि सिक्‍ने कुरा धेरै छन् । नागरिक जिम...
कुनै एउटा प्रचण्डपथ वा साइनिङ पाथले एउटा पन्थ बनाउन सक्छ । विचारधाराले एउटा बलियो राजनीतिक...
भूपू समाजवादी र असली समाजवाद [समाजवाद बहस ६]
अस्ट्रेलियालाई लकडाउन गरिएको भए पनि नेपालमा जस्तो छैन । ठूलठूला जहाजहरूबाट कोरोना संक्रमित...
सानु घिमिरे ज्योत्सना
लकडाउनको यो चरणको पर्याप्त तयारी र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन् हुन नसके धेरै नागरिकहरूक...